Vakashela iDisneyland, eFrance - World Tourism Portal
Vakashela eDisneyland, eFrance
I-Disneyland Park Paris
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-EuroDisney
Bukela ividiyo ekhuluma ngeDisneyland
Uma ufuna ukuvakashela iDisneyland, yangaphambili I-Euro Disneyland futhi I-Disneyland Resort Paris etholakala ku Paris Indawo engaphansi kweMarne-la-Vallée, kufanele wazi ukuthi iyinhlangano ye-Disney Kingdom yase-Yurobhu yepaki yezindikimba zabo ze- "The Kingdom Kingdom". Kwakuyindawo yesibili ye-Disney theme park resort ukuvula ngaphandle kwe-United States, ngemuva kweTokyo Disney Resort.
“Bonke abamukelayo kule ndawo ejabulisayo, bayemukelwa! Kwake kwenzeka isikhashana, umdidiyeli wezindaba ovelele, uWalt Disney, ophefumulelwe yizindaba ezithandwa kakhulu zaseYurophu, wasebenzisa izipho zakhe ezikhethekile ukuwabelana nomhlaba. Ubuke uMbuso Wemilingo lapho lezi zindaba ziqala khona, futhi wazibiza ngeDisneyland. Manje iphupho lakhe libuyele ezweni elaliqhakambisa. I-Euro Disneyland inikezelwe kwabancane nabancane enhliziyweni, ngethemba lokuthi izoba umthombo wenjabulo futhi ugqozi kuwo wonke umhlaba. ” - UMichael D. Eisner, Ephreli 1, 1992
IDisneyland Paris inamapaki amabili, I-Disneyland Park futhi IWalt Disney Studios Park, nesifunda sokuthenga, IDisney Village. IDisneyland Park iyipaki wonke umuntu ake ayizwa futhi ayilindele, kanti iWalt Disney Studios Park ine-theme evamile yokwenza ama-movie - kodwa iseseDisney kakhulu. Idolobhana lakhiwe ezitolo nezindawo zokudlela.
Amapaki wengqikimba ye-Disney adume kakhulu nge- "Audio-animatronics," ukunakwa kwemininingwane, ukucabanga kwensiza, izixuku, kanye namanani aphezulu. Inhloso ukukhipha kabusha ngokuphelele “umlingo” we-Disney Franchise; abasebenzi 'ababona abasebenzi' kepha “bangamalungu”; ipaki ligcinwa lihlanzekile; futhi nomaphi lapho uzothola khona umshini osebenza kahle. Isibonelo, ngeke usithole uhlamvu olufanayo lwe-Disney kabili ngokubona - azikho izimpinda. Izingane ngokusobala zigxila kwe-Disneyland, kepha izivakashi ezindala azinakwa nazo.
Zonke amapaki ezindikimba alandela ukusetha okufanayo, kodwa ngokweqiniso kunomehluko omkhulu wesifunda.
Ukuhweba okuphelele yinto okufanele uyamukele, ungayinaki noma uyijabulele. Ngaphandle kwezitolo ezithengisa kuwo wonke amakhona, ukugibela okuningi “kuxhaswe” izinkampani ezinkulu ezahlukahlukene.
Ukwenza isipiliyoni sibe semlingo futhi sithokozise ngokwengeziwe, iCity of Light imane nje uyihora lesigamu sehora.
Ngokuhambela kwezigidi ezingama-15 e-2017, iDisneyland Paris idlulise i-Eiffel tower njengendawo ethandwa kakhulu yezivakashi eYurophu futhi isezindaweni eziphezulu kakhulu ezivakashelwa ngamapaki e-10 emhlabeni. Ngokufanayo nenkathi efanelekile yokuvakasha yilapho inani lezivakashi liphansi futhi isimo sezulu sihle. Umthetho ojwayelekile uma ufuna ukugwema izixuku uwukuthi gwema amaholide esikole saseFrance. Khumbula ukuthi ngesizini ephansi eminye imibukiso neminye imigilingwane ingahle ingasebenzi.
Imicimbi Ekhethekile iyahlukahluka unyaka ngamunye (yingakho kungcono ukubheka iwebhusayithi esemthethweni ye-Disneyland Paris mayelana nokunikezwa ngenkathi uvakasha) kepha kukhona okubanjwa unyaka nonyaka ngosuku olufanayo: I-Disney Halloween Party futhi UKhisimusi Ka-Disney Ofuna Ukudla:
The I-Halloween Party kwenzeka ngosuku lwe-1, ukusuka ku-20: 30 kuya ku-2am ngosuku lokugcina luka-Okthoba. Kukhona izivakashi ezingahamba iqhinga noma ukwelapha kulo lonke ipaki, gqoka Izembatho ze-Halloween, bahlangane nabo villains ozithandayo futhi uhlangabezana nazo zonke izinto ezihehayo kuze kube 2am njengoba ipaki iba iqembu elikhulu. Iphathi AKUMAHHALA futhi umuntu kufanele athenge ithikithi kusengaphambili. Ukuhlobisa i-Halloween kuzoba phezulu ngesonto eledlule lika-Okthoba futhi kuzokwehliswa lapho nje iviki lokuqala likaNovemba selivuliwe.
UKhisimusi Ka-Disney Ofuna Ukudla umcimbi omkhulu kakhulu owenzeka kuzo zombili iziqiwu ukusuka maphakathi no-Novemba (ngemuva nje kwe-Halloween) kuya esontweni lokuqala likaJanuwari. Womabili la mapaki azogcwala imihlobiso kaKhisimusi kanye ne-kulala kwe-Beauty kulala kuzoba nezinkulungwane zezibane ezikhanyayo ngaphezulu kwemibhoshongo yayo. Okwesizini ye-2018 amapaki azofaka i-parade ekhethekile ebizwa ngokuthi I-Disney Christmas Parade kanye I-Mickey's Magical Christmas Light futhi Merry Stitchmas (imibukiso yomculo) phambi kwe Town Town Theatre kanye neCastle Stage ngokulandelana eDisneyland Paris. IWalt Disney Studios Park izophinde ibe nemicimbi ekhethekile kufaka phakathi: Christmas Christmas Goofy sika (umbukiso wokuqagelwa kobusuku ebusuku eMbhoshongweni Wokwesaba) no Thepha, Thepha, Thepha uhambisane ne-Christmas Big Band yeMickey (umbukiso okhethekile eWildagique Theatre). Usuku lwangaphambi koNyaka Omusha kugujwa ngendlela enhle kakhulu eDisneyland Paris (hhayi iWalt Disney Studios), njengoba ipaki ligijima I-Parade Entsha Yonyaka Omusha kanye nokubabazekayo I-Fireworks yoNyaka oMusha yoNyaka izokhanyisa isibhakabhaka kanye lapho iwashi lifika phakathi kwamabili. Ukuhlobisa kukaKhisimusi kugqame kakhulu kuzo zombili i-Disney Village kanye ne-Disney's Resort Hotels.
IDisneyland Resort Paris ixhumeke kahle kuzo zombili izikhumulo zezindiza zamazwe omhlaba ngaphakathi Paris.
Uma usepaki, imodi yakho yokuhamba izohamba. I-Disneyland ihlukaniswe izigaba ezine ezinezihloko (iDiscoveryland, iFrontierland, i-Adventureland kanye neFantasyland) nendawo yezitolo ephakathi nendawo neyolwazi Main Street USA.
Uma udinga ukusuka kolunye uhlangothi lwepaki uye kolunye, ungathatha isitimela esijikeleza iPaki futhi ume endaweni ngayinye kwezigaba ezinkulu. (Ngaphandle kwe-Adventureland)
Uma uzithola ungemuva kwepaki ngesikhathi semvula enkulu, kunomgwaqo ongaphansi kwesikebhe ongakuthatha yonke indlela ukusuka kuPirates YaseCaribbean uya ngaphambili kwepaki.
Izinsizakalo zebhasi zikhona ezingakususa eDisney Village kanye nokungena okuphakathi kwamahhotela. Lawa mabhasi mahhala.
Ukutholakala kwezihlalo ezinamasondo kuhle kakhulu, futhi kunezindawo ezimbalwa kakhulu ezinezithiyo ezijwayelekile, njengezitebhisi ezivalekile, ezenza ukufinyelela kube nzima. Uhlelo oluhle kakhulu lokufinyelela kwabantu abakhubazekile kumakhwela amaningi selusendaweni, kepha ngenxa yezizathu zokuphepha nezindawo zokuphuma, abanye abagibeli basadinga ukuthi umgibeli akwazi ukuhamba noma ukugibela isitebhisi. Kungumqondo omuhle ukuthola ipasipoti yokukhubazeka esikhungweni Sezokwazisa lapho ufika epaki; ukwenza lokhu kwenza kube lula kubasebenzi ukukhomba nokusiza izivakashi ezikhubazekile. Ukudlula ngeke kunikeze umuntu okhubazekile ilungelo lokuthola umugqa, kepha kuyakuvumela ukufinyelela okusizayo ekungeneleni abagibeli ngamasango ophumayo kunokuba kube ngamasango okungena anqunyelwe.
Ukuba yipaki yokuqala yendawo yokuchithela, iDisneyland Park yavula ngo-Ephreli 13th 1992. Ipaki, kanye nayo yonke enye indawo yokuphumula, ibinenkinga yezimali okungenani iminyaka engu-20 futhi ngeshwa ayivulanga ezinye izikhangisi ezintsha kusukela 1994, ene-Space Mountain: La Terre de la Lune. Phezu kwalokhu, kubhekwa njengesiqiwi esihle kunazo zonke “sendlu” epulanethi ngenxa yokunakwa kwayo okuningana nemininingwane. Ukusuka ekhanda le-Main Street USA kuya emagumbini afihliwe e-Adventureland kanye nezingadi ezinhle zaseFantasyland, kusobala ukuthi abacabangi bokwenza umsebenzi omkhulu. Iningi lama-headliners, kufaka phakathi iBig Thunder Mountain, i-Star Tours, iPirates yaseCaribbean kanye nePeter Pan's Flight bathole izinguquko ezinkulu emgubhweni we-25th wepaki futhi manje ubukeka ungcono kunangaphambili!
UMgwaqo Omkhulu wase-USA
Isango elisemthethweni eliya epaki, lenza izivakashi zihambe futhi zithole idolobha eMiddle America, kuma1900s kuyo yonke inkazimulo yayo. Ungathola futhi izindlela zokuhamba abantu ababezisebenzisa kule nkathi njengezitaladi ezidonswa ngamahhashi!
Lo mhlaba ocacile, oshiywe ku-Main Street USA, ukhokha intela yedolobha laseMelika eWild West ngekhulu le-19th, elibizwa nge Thunder Mesa. Idolobhana elichume ngesikhathi seGold Mining Boom, kodwa manje selilahliwe futhi kushiwo izinganekwane ezingejwayelekile.
I-Fastpass okunikezwayo: Big Thunder Mountain Railroad
Lo mhlaba ugxile ezenzakalweni eziningi izinhlamvu ze-Disney eziye zabhekana nazo. Hlakazeka ezindaweni ezinezihloko ze-3 ngokususelwa kwi-Indiana Jones, iPirates of I-Caribbean futhi i-Aladdin enethonya elinamandla lama-Arabhu nelamaNdiya, iyigugu eliphelele futhi libhekwe njengenye yezinhlobo ezinhle kakhulu zalo.
I-Fastpass okunikezwayo: I-Indiana Jones neThempeli Lokulunga
Indawo lapho zonke izinganekwane ze-Disney ziphila khona. Lo ngumhlaba omuhle kakhulu wepaki ngayinye yesitayela se-Disneyland emhlabeni wonke futhi awungenzi ize. Lapha ungakhuphuka phezulu ngenhla kwe-neverland noPeter Pan, uhlangane namakhosazana akho owathandayo ePrince Pavilion futhi uthathe uhambo olujabulisayo emhlabeni wonke ku-A A Little World.
I-Fastpass enikelwe: Indiza kaPeter Pan
Qaphela: IFantasyland ivala ihora le-1 phambilini kunaleso sikhathi sokuphumula kwepaki ukuze ihlaliswe ngombukiso womlilo ngemuva kweNqaba KaCinderella.
Le ndawo ithatha umqondo we- "Tomorrowland" ukuthi ungaya phambili. Izwe ligxilisa ngokuphelele emcabangweni wezindaba zeJues Verne ezikhuluma ngezimangaliso zokuqamba komuntu. Ngenkathi izwe lilahlekelwe ngumbala othile owake waba nawo, namanje umkhulu.
I-Fastpass enikeziwe: I-Hyperspace Mountain, i-Buzz Lightyear Laser Blast, izinkambo ze-Star: I-Adventures iyaqhubeka
IWalt Disney Studios Park
Ipaki lodade leDisneyland Paris lavulwa nge2002. Kusukela lapho ithole ukugxekwa okuningi kokuntula umuzwa we- “Disney” nokuba yi-miniscule. Ezinye zezimangalo ziyiqiniso (ipaki yeWalt Disney Studios njengamanje iyipaki elincane kunazo zonke leDisney emhlabeni kodwa hhayi lona onabagibeli abancane) kodwa ipaki inezinto ezithile ezihlukile kakhulu nezijabulisayo, okufanele ukwenze okungenani kube kanye. Ipaki izokwanda kakhulu phakathi kwe-2019-2023 ezizoguqula i-Backlot ibe yizwe eligcwele ligcwele ngokugxila kubalingisi beMarvel, engeza ichibi elisha, inwebe indawo ephakathi nendawo futhi ingeze izindawo ezintsha ze-2 Frozen futhi I-star wars Franchise. Ngeshwa zonke lezi zinhlanganisela nezisematheni zizobona ukuvalwa kweminye imijaho eyithandayo njenge-Studio Tram Tour: Behind The Magic neR Rock n 'Rollercoaster. Ngakho zibambe ngenkathi usakwazi!
Uhambo oluya ezweni lama-movie ku-Front Lot, umnyango oqonde eWalt Disney Studios Park bese usetha isimo sezulu ngomlingo osuzophuma.
I-Disney Studio 1- Uyemukelwa eHollywood! Yehlisa leli boulevard elincane liphefumulelwe yiHollywood Boulevard yangempela ku e-Los Angeles futhi ugxume ungene ngokubabazekayo futhi ubaleke okumangazayo kwamafilimu. Konke lokhu ngaphakathi nangomoya! Ungakhohlwa ukubona izitolo ezahlukahlukene ze-10. IStudio ibuye isebenze njengokungena kwepaki, njenge-Main Street USA ngaphezulu eDisneyland Park.
Ngena Egcekeni Lokukhiqiza. Igcwele abagibeli abesabekayo, imibukiso ebabazekayo kanye nokudlela okufanele izinkanyezi, lo ngumhlaba wokuqala izivakashi ezigijimisana nawo ngemuva kweStudio 1 futhi kusiza kakhulu ukusetha ithoni lepaki.
I-Fastpass enikelwe: I-Twilight Zone tower of Terror
Ngena emhlabeni omkhulu wepaki bese ujoyina ukusakazwa kwezinye izindaba ezinkulu ze-Disney. Shayela ngosayizi yegundane, uwele eMpumalanga I-Australia Okwamanje noma ukhuphukela phezulu ekusebenzeni kwe-paratrooper, lo mhlaba amathani omnandi futhi unethonya elinamandla kusuka kuPstrong. Umhlaba ngaphambili wawaziwa njenge-animation Courtyard, kuze kube yi2007.
I-Fastpass okunikezwayo: I-Ratatouille: I-Adventure, I-Magic Carpets yase-Agrabah
I-single Rider enikelwe: uCrush's Coaster, RC Racer, Ratatouille: I-Adventure
Sukuma ivolumu ku-Rock n 'Rollercoaster, zibonele umdlalo omuhle kakhulu wemoto noma uhlangabezana nemiphumela ekhethekile evela ku-movie ye-movie, i-Backlot igcwele okuhlangenwe nakho okugcwele kwe-adrenaline. I-Backlot izoguqulwa ibe ngumhlaba obizwa ngokuthi iMarvel-themed futhi cishe uzovala ngasekupheleni kwe-2018 noma ekuqaleni kwe-2019.
I-Fastpass okunikezwe: Rock n 'Rollercoaster
Uma ungahlelela isikhathi sakho ngandlela thile, ungahle ufise ukusebenzisa leyo yamahhala I-FastPass uhlelo. Uma ufika kugibelaji, ungathola okubizwa ngokuthi ukuphumelela okusheshayo okukuvumela ukuthi udlule ngobuningi bolayini kusethi, ngokuzayo. Noma ipaki igcwele ngokulingana kuphela, kuwumqondo omuhle ukuthola ukudlula ngokushesha komgibeli odumile ekuqaleni (Isibonelo esikhulu seBig Thunder, kaPeter Pan ne-Tower of Terror). I-FastPass itholakala kuphela kubagibeli abaziwa kakhulu abambalwa. Ngezinsuku ezingezona eziphakeme ngomugqa ophansi kungenzeka bangakhathazi ukukhipha i-Fastpass kwezinye ezikhangayo, bazikhiphe kuphela ngenxa yokugibela okubili noma kwemithathu okuthandwa kakhulu epaki.
Uma kunento eyodwa awusoze waba nenkinga yokuthola eDisneyland Paris, ezitolo zayo. Izitolo ezahlukahlukene ezinesihloko nezasakazwayo zisakazeka kalula kuyo yonke ipaki, zithengisa izinto ezithengiswayo zakwaDisney kanye nezemibhalo jikelele. Baphethe konke kusuka ngamapensela kuya ezincwadini, kusuka ku-Indiana Jones fedora izigqoko kuya izingubo eCinderella. Isibhakabhaka ngokuyisisekelo umkhawulo wemali ongayisebenzisa eDisneyland Paris - ungathenga amathokheni engilazi / amakristalu nezithombe zenkemba kule nkundla ephakathi. Uma uza eDisneyland Paris nezingane, zilungiselele ukufinyelela ngokujulile emaphaketheni akho; izigqoko zama-cowboy nezikhuthu noma izinkemba zezinkemba kubukeka njengezinto ezibalulekile kubafana; Izingubo zeCinderella zamantombazane. Noma iyiphi indlela, iqoqo lezinto ezinhle zengane cishe lizokubuyisela emuva cishe nge- € 50. Ngeza kulawa onodoli abaningi, izikibha kanye nezibalo zesenzo ... kulula ukuchitha i- € 50-100 inhloko ku- "izikhumbuzo" - noma ngaphezulu.
Indawo enkulu yezitolo eDisneyland Paris UMgwaqo Omkhulu wase-USA. Isitolo esikhulu eWalt Disney Studios Paris I-Disney Studio 1, ozoyibona iqonde ngaphambi kokungena epaki. IDisney Village iqoqo elikhulu labathengisi, kufaka phakathi i-Disney Store.
I-Disneyland Paris yezemidlalo zokudlela eziningi kanye nemigoqo enento eyodwa efanayo: Kuyabiza. Ezinye ziyindawo elula yokudla okusheshayo, kanti eminye imnandi kakhulu. Ukudla kuvame ukubiza. ICafe Mickey iyabiza (€ 130 yabantu abane) kepha izinhlamvu zeza ngasendaweni futhi ungagcina isikhathi esithile ungafiki epaki ukuze izithombe zezingane zithathwe nezinhlamvu.
Khumbula ukuthi ipaki ivalwa ekuqaleni kobusika, entwasahlobo nasekwindla ngakho-ke kunzima ukudla isidlo sakusihlwa epaki ngemuva kobumnyama.
AbakwaDisney bahlinzeka ngamahhotela ahlukahlukene phakathi naseduze kwepaki. Ziyahlukahluka ngekhwalithi nangesitayela. Zonke kufanele zinikeze mahhala okuphephile ukugcina izinto zakho zenani elikhulu phakathi nosuku, kufaka phakathi amakhompyutha wamanothi (amaLaptops). Buza endaweni yokwamukela. Iningi likubude bokuhamba ibanga ukusuka ePaki
Futhi okungenhla, kunamahhotela ambalwa angaphandle, konke lokhu kuthumela epaki kodwa awunayo itimu ye-Disney futhi kungenzeka kungafakwa emaphaketheni akhethekile okunikeza.
imininingwane engaphezulu yeDisneyland, eFrance
Iba ingane futhi vakashela iDisneyland, eFrance